Pregnancy – Page4– Healthy Life Journal
ကလေး ဘာကြောင့် မရသေးတာလဲ . . .
မေး ။ သမီးအိမ်ထောင်ကျတာတစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။ သားသမီးမရသေးလို့ပါ။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော စစ်ပြီးပါပြီ။ နှစ်ယောက်လုံး အဖြေကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက အတူတူနေပြီးတာနဲ့ သုက်ရည်က အကုန်ပြန်ထွက်ကုန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကလေးမရသေးတာလား။ ပက်လက်အနေထားနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေရင်လည်း ချက်ချင်းပြန်ထွက်ကုန်ပါတယ်ရှင့်။ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ...
အမြွှာကိုယ်ဝန်လိုချင်ပါတယ် . . .
မေး ။ သမီး အသက်၂၀ မှာ ကလေးတစ်ယောက်၊ အသက် ၂၁မှာ ကလေးတစ်ယောက်ရပါတယ်။ အရမ်း နီးသွားလို့လားမသိဘူး၊ သားအိမ်နဲ့ ချုပ်ရိုးအရမ်းနာလို့ ခဏခဏ ဆရာဝန်နဲ့ပြတော့ သားအိမ်နံရံ ထူတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒါ ဆေးသောက်ဆေးထိုးပြီး အခုမသက်သာဘူး။ အဲဒါ သားအိမ်ပြန်ခြစ်တာနဲ့...
ကလေးလိုချင်လို့ပါ . . .
မေး ။ သမီးအသက် ၂၅နှစ်ပါ၊ အိမ်ထောင်ကျတာ ၅ လရှိပါပြီ။ အခု ကလေးလိုချင်လို့ပါရှင်။ ပထမ ၁လ ကို ဆေးကတ်သောက်ပါတယ်၊ ရာသီလာပါတယ် ဆရာ။ ဒုတိယ ၁လကို ၃လခံတားဆေး ထိုးလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ ထိုးလိုက်တဲ့ ၁၂ပတ်အတွင်း ရာသီလုံးဝ...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံကို ရွေးချယ်လိုက်နာတာဟာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်မှာ ကလေးရလွယ်သလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ ကလေးငယ်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ (၁) သင်ဟာ ကလေးယူတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားကတည်းက နေ့စဉ်ဖောလစ်အက်စစ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့အားဆေး မှီဝဲပေးပါ။...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း အိပ်ချိန် ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း အမျိုးသမီးတွေက ခါတိုင်းထက် အိပ်ချိန်ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ နေ့ဘက်မှာတစ်ရေးအိပ်ပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာက အိပ်စက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်း အိပ်စက်ရတာကောင်းပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာစလို ပျို့ချင်အန်ချင်...
၊ လရိပ်မေ ၊ – ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေပူနဲ့ချိုးတာက အန္တရာယ်ကင်းပါသလား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေပူနဲ့ချိုးတာ၊ ရေပူစိမ်ချိုးတာနဲ့ ပေါင်းခံ ချွေးထုတ်တာတွေကို ရှောင်သင့်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ အပူဒဏ်က ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို မြင့်တက်စေကာ သွေးဖိအားကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဗိုက်ထဲက...
မေး. ညီမက သိပ်မကြာသေးခင်က ကိုယ်ဝန်တစ်လကျော်နဲ့ ပျက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ပျက်ကျပြီးကတည်းက သွေးက တစ်ပတ်လောက်ကောင်းကောင်းဆင်းပြီး ပြီးသွားပြီထင်ခဲ့တာ။ အခုထိ တစ်စက်စက်နဲ့ လာလိုက် တစ်ရက်လောက်မလာလိုက်၊ ပြန်လာလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ ဒါဟာ ဖြစ်တတ်ပါသလား ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ရပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါဦးရှင်။ Pann Pann...
သဘာဝနည်းများနဲ့ ကိုယ်ဝန်တားခြင်း (Natural family planning)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မင်္ဂလာပါဆရာ . . သမီးနာမည်က . . . ပါရှင့်။ သမီးအသက်က ၂၃ ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်ဆရာ။ အိမ်ထောင်ကျတာလည်း လပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ ကလေးက မလိုချင်သေးတော့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ဘယ်လိုဆက်ဆံနေထိုင်ရမလဲ ပြောပြပေးပါဆရာ။ တားဆေးလည်း...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ကျန်းမာရေး (၅)
ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ဘယ်အချိန် ဆေးရုံတက်မလဲ . . . ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေက ကိုယ့်အသက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့အပ်နှံထားနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ အပ်ပြီး ကလေး မွေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် မွေးတော့မယ်၊ ဖွားတော့မယ်ဆိုရင် ဆေးရုံဘယ်အချိန်တက်ရမလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဗိုက်နာ၊ သွေးဆင်း၊...